Asomafo 12 NA-TWI - Ɔtaa - Saa bere yi mu ara na ɔhene - Bible Gateway
Asomafo 11Asomafo 13
Asomafo 12 Nkwa Asem (NA-TWI)
12 Saa bere yi mu ara na ɔhene Herode kyekyeree asafomma no bi fitii ase yɛɛ wɔn ayayade. 2 Ɔde nkrante kum Yohane ne nua Yakobo. 3 Ohui sɛ Yudafo no ani gye nea ɔyɛe no ho no, ɔma wɔkɔkyeree Petro nso. Asɛm yi sii Apiti Nna Afahyɛ no mu. 4 Wɔkyeree Petro no, wɔde no too afiase a na asraafo baanan na wɔwɛn no bere biara. Herode yɛɛ n’adwene sɛ, Twam Afahyɛ no akyi, obedi n’asɛm wɔ ɔman no anim. 5 Bere a na Petro da afiase no nyinaa, na asafo no bɔ mpae dennen srɛ Onyankopɔn sɛ ɔnhwɛ no so.